Madoonaysaa Inaad Shaqo Wanagsan Heshid ama Adigu aad Abuuratid Ganacsi?
Haydaha SOS Children’s village Somaliland, SOS Children’s Village Iceland, SONYO iyo Shaqodoon waxay si wada-jir ah u hirgalinayaan mashruuca “The Next Economy” iyaga oo tabararo siinaya dhalinyarta caqabaduhu ka haystaan inay ku xidhmaan suuqa shaqada ama u baahan in laga caawiyo si shaqo fiican ay u helaan ama u bilaaban lahaayeen ganacsigooda gaarka u ah.
Hayadaha SOS,SONYO iyo Shaqodoon waxa ay ku wargalinayaan dhamaan dalinyarada Somaliland gaar ahaan dhalinyarada ku nool magaalada Hargeisa inay bilaabayaan mashruuca THE NEXT ECONOMY oo ka taageeri doona dhalinayada dhinacyada shaqo – abuurka iyaga oo qaadan doona tabaaro kala duwan mudo lix bilood ah oo ku saabsan:
Sida loo Samaysto/abuurto- Ganacsi
Sida loo raadiyo loona Helo shaqo wanaagsan – Shirkadaha ganacisga, dawlada, hayadaha maxaliga, iyo hayadaha caalamiga.
Mashuurca “Next Economy” waxa ka faaiidaysan doona 700 dhalinyar ah muddo afar Sanno ah, Sannadka 2020 waxa la qaadanayaa dufcadii shanaad oo ah 150 (gabdho iyo Wilal).
Shuruudaha laga Rabo Dhalinyarada
Da’ada 15-30 Jir
Dhigta ama Dhameeyay Jamacad
Dugsi fasamada gacanta –ku jira/dhamaystay
Waa in aanu shaqaynin wakhti xaadirkan.
Waa in uu muujiyaa doonista in uu shaqo abuurto ama uu shaqo helo.
Waa inuu yahay qof leh hal abuur ganacsi.
Waa in wuu leeyahay Ciwaan laga heli karo ama qof lagala soo xidhiidho.
Waa inuu yahay qof ka bad qaba noocyada kala duwan ee balwadaha
Sida loo soo codsanayo: Dhalinyarada xiisaynaysa mashruucan waxay ku soo hagaajinayaan waraaqahooda CODSIYADA/Application& CV-goobaha xafiiska Hay’ada SOS ee Hargeisa ama wuxuu ku soo diri karaa online; e-mail: Next.Economy@sos-somaliland.org
Website: www.next-economy.com. Codsashadu waxay ka bilaabmaysaa: 25th December 2019 waxay ku egtahay 08th January 2020
Copyright © 2021 Somaliland Jobs Center.